Landa amaphephadonga we-MacOS Mojave we-Mac yakho | Ngivela kwa-mac
Kungenzeka kanjani ukuthi kungenjalo, sesivele sinemifanekiso yamaphephadonga ye-MacOS Mojave etholakalayo yabo bonke abasebenzisi abafuna ukuyilanda ye-Mac. Kulokhu kumayelana izithombe ezimbili zogwadule oludumile lapho kungabonakala khona imini nobusuku.
Amaphephadonga amabili anesinqumo esingu-5120 × 2880, okusho ukuthi zizobukeka zizinhle kunoma iyiphi iMac ngisho nangesinqumo seRetina. I-Apple ikhiphe izolo izinhlobo ze-OS yayo ehlukile futhi esimweni se-macOS ithinte iMojave, igama ebesevele linenethiwekhi izinsuku eziningi futhi ikakhulukazi ngilahlekile ekuvotweni kwegama esiliqhube ku Ngivela eMac.
Sikushiya isixhumanisi ukuze ukwazi ukulanda ngqo amaphephadonga amabili kufayela le- ngokuphelele free bese uwasebenzisa kuma-desktops wakho we-Mac. Kumele ukhethe eyodwa oyithanda kakhulu noma zombili bese uzilanda ngqo kulesi sixhumanisi. ugwadule emini futhi kusuka kulokhu okunye ebusuku.
Impela njengoba izinsuku zihamba kungenzeka ukuthi i-Apple izokwengeza iphepha lodonga eqoqweni le-MacOS Mojave, ngakho-ke sizolinaka futhi uma kunjalo sizokwabelana ngalo nani nonke. Okwamanje, sesingavele sizijabulele lezi ezimbili. Ukuzigcina kufolda yezimpande zohlelo ngokumane ungalandela lezi zinyathelo. Thina Siyaqhubeka nokuxegisa inkulumo yosuku izolo futhi i-Apple iyaqhubeka nezingqungquthela zabathuthukisi kulo lonke leli sonto, ngakho-ke uma kuvela izindaba noma ushintsho sizokushicilela ku-I'm on Mac.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » eziningana » Landa amaphephadonga we-MacOS Mojave we-Mac yakho
ICarPlay ihlanganisa iGoogle Maps neWaze ku-iOS 12
I-Apple ingeza i-adaptha yamandla entsha ye-30W USB-C